Scalping Trading February 2021 Chọta Onye ahia kacha mma | Mụta ịzụ ahịa
Gịnị bụ Scalping Trading: Best Forex Broker maka Scalping 2021
Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa azụmaahịa n'ịntanetị na ogologo oge, ị ga-enwe usoro maka ebe ị maara nke ọma. Onweghi atumatu abuo bu otu - yabụ ihe gha enyere onye ahia aka aghaghi aghachitere gi. Na na-ekwu, scalping bụ otu n'ime usoro kachasị eji eme ihe n'ịntanetị.
Na nkenke, ahia ahia bu uzo nke ichota otutu oge, ubochi di obere. Onye ahia ahụ ga-achọ imeghe ma mechie azụmahịa na obere ihe egwu, na-ele anya na ị ga-erite uru site na mmegharị ọnụahịa obere. Dị ka ndị dị otú a, onye ahịa ahụ ga-eji ihe osise 1 nkeji, ebe ọ bụ na ha kwesịrị inwe echiche nke ahịa na oge iji kpochapụ isi nke ọma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọpụta ma ụdị azụmaahịa a ọ dabara adaba maka gị - gbaa mbọ gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị Gịnị bụ Scalping Trading? Ọ bụghị naanị na anyị ga-enye gị ins na outs nke ihe scalping bụ na otu o si arụ ọrụ, mana anyị ga-atụlekwa ndị ahịa azụmaahịa kachasị mma iji atụmatụ ahụ.
Rịba ama: Scalping trading - ma ọ bụ usoro ịzụ ahịa ọ bụla maka okwu ahụ, abụghị ihe ị ga-enwe ike ịchịkwa n'abalị. Kama nke ahụ, ọ na-ewe ọtụtụ ọnwa iji mezuo atụmatụ ahụ nke ọma.
Gịnị bụ Scalping Trading?
Na ụdị nke kachasị, scalping bụ atụmatụ azụmaahịa na-eleba anya obere uru, na-agbasakarị kwa ụbọchị. Ka o siri dị, onye ahịa ahụ anaghị enwekebe imeghe ahịa karịa nkeji ole na ole. Nke a dị nnọọ iche na onye na-azụ ahịa na-agagharị agagharị, nke nwere ike ịhụ ndị ahịa na-ejigide ọnọdụ maka ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu.
Agbanyeghị na enwere ike iji azụmaahịa azụmaahịa na klas ọ bụla bara uru, ọ na-adịkarị na oghere oghere. Nke a bụ n'ihi na ụzọ ego - ọkachasị ndị isi, na-agagharị na obere elekere na elekere. Ọzọkwa, isi ụzọ ego abụọ dị mmiri mmiri nke ukwuu, na-eme ka ha zuo oke maka atụmatụ azụmaahịa.
N'ihe banyere ihe ndị bụ isi, ịchachapu nwere ike ịbụ nnukwu ọgụ, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na achọrọ ka itinye ego ahụ tinye 100% nke oge ha na ike ha ka ha nwee ahịa. Nke a bụ n'ihi na onye ahịa ahụ kwesịrị ịdị njikere ịkwado otu ohere ma jiri aka ya hụ ahịa ahụ.
Site na nke ahụ kwuru, A na-elekarị ịgba scalping anya dị ka obere ihe ize ndụ atụmatụ, dị ka ndị ahịa ga-wụnye iwu nkwụsị-ọnwụ iji mee ka ọghọm dị obere. N'ezie, nke a dị oke mkpa. dị ka nnukwu ọnwu nwere ike ihichapụ ọtụtụ azụmaahịa scalping na-aga nke ọma nke onye ọchụnta ego mere tupu ụbọchị ahụ.
Kedu uru na ọghọm nke ịkpụcha?
Atụmatụ dị ala dị ala mgbe etinyere nkwụsi ike nwere ezi uche
Ike inweta uru ugboro ugboro
Dakọtara na isi ụzọ abụọ na-erite uru site na nnukwu mmiri
Kacha adị irè mgbe onye ahịa ahụ nwere ọkachamara na otu ụzọ ego
Na-ewe oge iji mụta atụmatụ ahụ
Uru dị obere-obere
Kedu ka Scalping Trading si arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na ị rụtụbeghị ụdị azụ ahịa mbụ, ọ ga-akacha mma ka anyị nye gị ihe atụ ole na ole iji kpochapụ alụlụ ahụ.
Ihe Nlereanya 1: Scalping GBP / USD
Ka anyị kwuo na ị na-achọ ịzụ ahịa GBP / USD site na iji usoro scalping gị. Startingkwụ amalite gị bụ £ 1,000, ma ikpebie ịghara itinye ego.
GBP / USD dị ugbu a na 1.3104
Mgbe ị na-amụ chaatị ndị ahụ, ị ​​chere na GBP nwere ike ịbawanye na nkeji ole na ole sochirinụ
Ka o siri dị, ị na-etinye ego ịzụta £ 1,000
Na-etinye iwu maka uru-ego na 1.3169, nke pụtara mmụba nke 65 pips ma ọ bụ 0.5%
Na-etinye iwu nkwụsị iji belata mbibi gị. Na 1.3077, nke a ga-efu 27 pips ma ọ bụ 0.2%
GBP / USD kụrụ 1.3169, yabụ a na-emechi ọnọdụ gị na akpaghị aka na uru nke 0.5% ma ọ bụ £ 5.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, ịkọcha akpụkpọ ahụ na-eche naanị maka uru dị ntakịrị. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ bụ nanị otu n'ime ihe abụọ ahụ gaara eme na ihe atụ ahụ e nyere. Ọ bụrụ na ahia ahụ gara nke ọma, onye na-etinye ego ga-enweta uru 0.5%, nke ruru £ 5.
Ọ bụ ezie na nke a na-ada ka obere uru pere mpe a ga-enweta, ọ dị mkpa iburu n'uche na onye ahịa ahụ ga-ele anya ịmeghachi ihe atụ ahụ dị n'elu ọtụtụ, ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ narị ugboro n'ụbọchị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ahia ahụ enweghị ihe ịga nke ọma, onye na-etinye ego ga-ejedebe nanị nfu ha naanị 0.2% ma ọ bụ £ 2.
Ka anyị lelee ihe atụ nke abụọ iji hụ na ị ghọtara otu ahịa azụmaahịa si arụ ọrụ.
Ihe Nlereanya 2: Scalping EUR / USD with Leverage
Agbanyeghị na ịre ahịa azụmaahịa na - eche maka mmegharị ọnụahịa pere mpe pere mpe, ekwesiri ịlele uru maka pips ma ọ bụ pasent - ọ bụghị uru ego kwa. Dị ka ndị dị otú a, ọ ga-ekwe omume ndị ahịa iji tinye ego na nyocha ha maka obere mmegharị ọnụahịa.
Nke a na - enye ndị ahịa ohere ịbawanye ogo nke ọnọdụ ha, na - achọghị itinye ego buru ibu. N'ihe atụ a, anyị ga-eleba anya na nsonaazụ ahịa azụmaahịa na EUR / USD mgbe ị na-etinye ntinye nke 10: 1 na onye ahịa ahụ.
EUR / USD dị ugbu a na 1.1389
Onye na-ere ahịa a na-ere ahịa na-eche na EUR ga-abawanye uru karịa USD na nkeji ole na ole sochirinụ, ya mere ha na-etinye iwu ịzụta
Onye na-ere ahia na-achọ mgbe nile inweta 0.3% uru site na ahịa ha, ya mere a na-egbu usoro iwu uru nke 1.1423
Iji mebie mfu ha na 0.1%, a na-etinyekwa usoro nkwụsị nkwụsị nke 1.1377
The ozu ahia na-etinye leverage nke 10: 1, na-ewere ngụkọta osisi si £ 1,000 ka £ 10,000
Azụ ahịa scalping na-aga nke ọma, ebe ọ bụ na EUR / USD kụrụ ọnụahịa ebumnuche nke 1.1423 na nkeji ole na ole ka e mesịrị
Dịka ihe atụ dị n'elu, uru 0.3% na £ 1,000 pụtara £ 3. Agbanyeghị, ka onye ahịa ahụ tinye leverage na 10: 1 na ọnọdụ ahụ, abawanye uru ya na £ 30. N'akụkụ tụgharịa, ọ bụrụ na e mechiri ahia ahụ na ọnwụ, nke a ga-ewere ọnwụ ahụ £ 10. Dika odi, ahia obula nke onye ahia ahia na eme ga abuta uru nke £ 30, ma obu loss 10. Nke a pụtara na onye ahịa ahụ kwesịrị ịhapụ otu azụmaahịa na-aga nke ọma n'ime atọ ọ bụla iji mebie.
Uru Scalping Trading
Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị ruo oge a, mgbe ahụ ị ga-amara na azụmaahịa azụmaahịa nwere echiche dị iche na nke na-azụ ahịa. N'ezie, ịkụcha ihe bụ ọtụtụ ihe na-achịkwa ma na-ahazi, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na naanị otu n'ime nsonaazụ abụọ ga-eweta onwe ha. Kama nke ahụ, ịkụ azụ ahịa na-ewekarị "ka anyị hụ etu ahịa si emeghachi".
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị pụtara ìhè nke ịzụ ahịa azụmaahịa.
Nkpughe nke Nsogbu
Otu uru dị oke mkpa nke iji atụmatụ azụmaahịa na-ere ọkụ bụ na ị na-enwekarị mwepu atụmatụ dị egwu. Nke a na-abịa n'ụdị usoro nkwụsị-nkwụsị, nke pụtara na ị gaghị atụfu karịa ihe ọpụpụ na-akpalite ọnụahịa.
Rịba ama: Iwu nkwụsị anaghị akwụ ụgwọ 100% nzuzu - ọkachasị na-azụ ahịa n'ọnọdụ ọnọdụ. Do nwere nhọrọ nke ịtọlite ​​nkwụsị nkwụsị, agbanyeghị, ụgwọ ọzọ nke a na-abịa nwere ike ime ka azụmaahịa na-abaghị uru.
N Oke ahia
Ọ bụrụ n'inwe agụụ siri ike maka ahịa ego, mgbe ahụ ịre ahịa azụmaahịa dị mma. Nke a bụ n'ihi na enwere ike ịchọrọ gị itinye ọtụtụ - ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ narị nke ahia kwa ụbọchị.
Echefula, ị ga - achọ ịme pips ole na ole na uru ọ bụla maka azụmaahịa, yabụ ịkwesịrị ịmegharị usoro ahụ kwa ụbọchị iji mee ka ịba uru baa uru. Dị ka ndị dị otú a, ịzụ ahịa ahịa kachasị mma maka ndị nke ịchọrọ ịzụ ahịa na oge niile.
✔️ Uru Mgbe Ahịa Jikọtara
Mgbe otu ihe onwunwe mere ka ọ kwụsie ike - nke a pụtara na ọ na-azụ ahịa n'ime oke ụfọdụ maka ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị, tupu ahịa ahụ ekpebie ụzọ ụzọ akụ ahụ ga-esote.
Dịka ọmụmaatụ, oge nkwado na GBP / USD nwere ike ịhụ ahia ahia ego na nso nke 1.3001 na 1.3050. Nke a na - eweta ọnọdụ dị mma maka azụmaahịa ahịa ahịa.
✔️ Nnukwu ohere ohere ahia
Enwere ike iji ahia ahia na-eme ihe ọ bụla. Nke a bụkarị ikpe mgbe ị na-azụ ahịa ụzọ abụọ dị mkpa, ebe ọ bụ na ahịa na-arụ ọrụ na 24/7. Ọzọkwa, isi ụzọ abụọ na-erite uru site na ikpo mmiri, na ọkwa volatility na-adịkarị ala - na-eme ka ọ dị mma maka ịkpụcha.
Zere Ihe Ihere Ndị Anyaukwu Na-eyi
Anyaukwu na-abụkarị ọdịiche dị n'etiti onye ahịa na-enweta uru na-agbanwe agbanwe, yana onye ahịa nke ahụ ọkụ ha bankroll site na enweghị uche ọnọdụ. Na nke ahụ kwuru, ịkọ ọfụma bụ naanị maka ịme obere-obere - agbanyeghị, uru a na-enweta ugboro ugboro n'ụbọchị. Nke a na-eme ka o doo anya na onye ahịa ahụ na-ezere ịme ahịa na-enweghị isi, dịka usoro ịba uru dị irè ga-enwe mgbe niile nkwụsị na nnweta-ịnweta iwu.
Atụmatụ Scalping Trading
Enwere ọtụtụ echiche ị ga - ebu ụzọ mee tupu ịmalite ịmalite ịzụ ahịa gị. Site na ịgbaso ndụmọdụ akọwapụtara n'okpuru, ị na-eguzo ohere kachasị mma ịchebe akụ gị site na ike ọgwụgwụ.
Ndụmọdụ 1: Jiri Chaatị Nkeji 1 Mee Ka Obi Tọọ Gị .tọ
Ndị na-etinye aka na ịzụ ahịa ọdịnala agaghị enwe mmasị na chaatị 1 nkeji. Nke a bụ n'ihi na ndị na-ere ahịa na-efegharị na-ele ihe osise ogologo oge, yabụ na eserese 1 nkeji abaghị uru na nke a.
Otú ọ dị, usoro 1 nkeji bụ ihe kachasị mkpa achọrọ mgbe ị na-ere ahịa, ọ bụghị ihe kachasị n'ihi na ị ga-achọ ịwụ elu na mmegharị ọnụahịa obere. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị oké mkpa na ị ga-enwe obi iru ala na nkeji 1 tupu itinye usoro ịkpụzi gị n'ọrụ.
Ndụmọdụ 2: Niche-Down ka Specific Ego abụọ
Zụ ahịa ahịa abụghị dị nnọọ banyere chaatị dị iche iche. Kama nke ahụ, ọ bụ maka inwe nghọta siri ike banyere ihe na-eme ụfọdụ ụzọ ego 'akara'. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme ego na-enwe mmegharị na-agbanwe agbanwe n'oge ụfọdụ ụbọchị? Ma ọ bụ, mmiri mmiri dị ntakịrị ntakịrị n'ụbọchị ụfọdụ? Kedu ụzọ ọ bụla, ihe ndị a bụ isi ihe metụrụ dị ka onye na-ere ahịa ahịa na-achọ ịmara.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bara uru ịtụle niching-ala naanị obere ụzọ abụọ. N'ime ime nke a, ị ga-enwela ihe ọmụma banyere obere ọnụọgụ abụọ ahọrọ, ma si otú a - nye onwe gị ohere kachasị mma nke ịme azụmaahịa ndị na-aga nke ọma karịa ịhapụ ahịa.
Ip Ndụmọdụ 3: Họrọ Nhọrọ Gị na Egwu Gị
Tupu ị na-eche maka ịtụkwasị ahịa azụmaahịa mbụ gị, ọ dị mkpa na ị ga-eche gbasara usoro azụmaahịa gị. Nke mbu, ikwesiri iche banyere uru ị choro irite na ahia obula. Onu ogugu a kwesiri inogide oge nile iji hu na nkpochapu gi bu usoro nhazi nke enweghi uche.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kpebie ịtụle 0.2% na uru ọ bụla, nke a bụ ihe iwu iji nweta uru kwesịrị ịnọ. N'otu aka ahụ, ọ dịkwa mkpa ka ị chee echiche banyere ọtụtụ ihe ị kwadebere idafu n'otu azụmaahịa. Dị ka uru gị na-enweta iwu, iwu ịkwụsị ịla n'iyi kwesịrị ịdịgide mgbe niile.
Ndụmọdụ 4: Need Chọrọ Oke Ọga Elu Maka Suga nke Ọma
Omenala swing ahịa nwere ike mgbe na-enweta site na a mmeri ruru ihe na-erughị 50% na-eme ka ogologo oge uru. Dịka ọmụmaatụ, onye na-achụ ego nwere ike ida 5% na azụmaahịa atọ na-enweghị isi, mana mezie 25% na azụmaahịa ha mepere maka ọtụtụ ọnwa. Agbanyeghị, okomoko a adịghị maka ndị ahịa na-ere ahịa.
N’aka ozo, ikwesiri inwetara onodu mmeri di elu iji mee ka scalping baa uru. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na idobe iwu nweta uru gị na 0.6%, yana iwu nkwụsị nkwụsị gị na 0.4%. Nke a pụtara na ịkwesịrị ịnweta akara mmeri nke opekata mpe 66% iji nweta uru ogologo oge, nke ruru ahịa mmeri 2 n'ime 3 ọ bụla.
Ndụmọdụ nke 5: Ikwesighi iji Leverage mee ihe ịga nke ọma
Ọtụtụ mgbe enwere echiche efu site na ndị ọchụnta ego ọhụụ na azụmaahịa azụmaahịa bara uru ịme ma ọ bụrụ na itinye ntinye ego na azụmaahịa gị. Ezie na leverage nwere ike ịmụba obere uru gị, ọ nwere ike ime otu ihe ahụ na mfu gị. Na nke ahụ kwuru, echiche kachasị mkpa banyere ịkpụchasị ụkwụ bụ na ịchọrọ ị nweta obere uru gafee ọtụtụ narị ahịa, yabụ itinye ego abụghị ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere oke mmeri.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-azụ ahịa na njikwa akaụntụ nke £ 2,000. Ọ bụrụ na etinyere ogo gị na 0.2%, nke a pụtara na ị ga - eme £ 2 maka azụmaahịa ọganiihu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere ike itinye azụmaahịa 100 kwa ụbọchị - yana 75% n'ime ha nwere ihe ịga nke ọma, ị ga - enweta ezigbo ego - ma n'otu oge ahụ na - ewulite ego azụmaahịa gị n'usoro.
Kedu ka m ga - esi họrọ onye na-ere ahịa Forex maka Scalping Trading?
Yabụ ugbu a ị matara ihe ọpụtara na azụmaahịa nke azụmaahịa scalping bụ yana otu esi arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ịmalite ugbu a banyere ịhọrọ onye na-ere ahịa. Iji chọta onye na-ere ahịa kacha mma maka mkpa azụmaahịa gị, ịkwesịrị ịme ọtụtụ echiche iji hụ na ikpo okwu dị mma maka ịkpụcha.
Nke a kwesịrị ịgụnye:
Nke mbu, ikwesiri itule udiri mgbasa nke onye na-ere ahia na ebubo. Maka ndị na-amaghị, nke a bụ ọdịiche dị n'etiti 'ịzụta' na 'ree' ọnụahịa nke otu ụzọ Forex. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ọnụahịa zụrụ na GBP / USD bụ '1.3117', ọnụ ahịa ọre bụ '1.3120'.
Site na ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa abụọ edobere na 3 pips, nke a pụtara na ị ga-achọ ịme opekata mpe pips 3 naanị iji gbajie. Ibu ibu mgbasa, ihe ị kwesịrị ime iji nweta ahia gị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, n'ihi ya, ọ dị oké mkpa na ị ga-eji onye na-ere ahịa na-agbasa agbasa.
Nke a enweghị ike ịdị mkpa karịa n'ihe gbasara ịkpụchasị akpụkpọ, n'ihi na ị ga-achọ inweta obere uru. Mgbasa ndị ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ nwere ike ịdịgasị iche dabere na ụdị ụzọ mbu ị na-azụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị isi ga - eji mgbasa ike gbasaa mgbe niile - dịka ọkwa mmiri na volatility dị ala, ọnụọgụ azụmaahịa dịkwa elu.
Iss isslọ Ọrụ Ahịa
N'elu mgbasa ahụ, ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee ụfọdụ gbasara ọrụ azụmahịa. Ọzọkwa, nke a ga-enwe mmetụta kpọmkwem na ike gị ịme obere uru ụbọchị niile, yabụ ịkwesịrị inyocha usoro ịkwụ ụgwọ ego nke onye na-ere ahịa na-arụ. A na-ebokarị nke a ebubo dị ka pasent nke ahia size, ma bo ya ebubo na nsọtụ abụọ nke ahia ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-etinye ahịa ruru £ 2,000, onye na-ere ahịa na-ebokwa 0.1% ọrụ. Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ £ 2 iji tinye ahịa ahụ. Y’oburu na ire ahia mgbe o ruru £ 2,200, ị gha ego ugwo nke £ 2.20. N'ikpeazụ, ịkwesịrị ịga na onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ dị ala.
Mara: Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na ntanetị ihu igwe na-enye azụmaahịa na-enweghị ọrụ, ịkwesịrị ịkpachara anya. Nke a bụ n'ihi na onye na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla site na ikwu, mana ha ga-akwụ ụgwọ nnukwu mgbasa.
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi siri ike na ọrụ dị ala dị oke mkpa dị mkpa iji chọọ mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa azụmaahịa maka ịkpụcha - dịka usoro nhazi usoro. Nke a bụ oge nke ọ na - ewe maka onye na - ere ahịa azụmaahịa iji mezuo iwu gị site na mgbe etinyere ya.
Ga-ahọrọ onye na-ere ahia nke nwere ikike iji mezuo iwu ị na-eme na micro-sekọnd - n'ihi na nke a ga-eme ka ị nweta usoro gị na ọnụego achọrọ. Ndị na-ere ahịa na-ebipụta ozi a na weebụsaịtị ha, n'akụkụ usoro eji eme ihe mgbe ha na ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa.
Advanced Charting Ngwaọrụ
Zụ ahịa Scalping chọrọ nyocha na nyocha dị elu iji nwee ihe ịga nke ọma. E kwuwerị, ị na-achọ ịkọ ụzọ ahịa ndị ahụ ga-aga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji nkeji. Nanị ụzọ ị ga-esi mee nke a bụ ịghọta nke ọma etu ngwa ọrụ eserese na teknụzụ na-arụ ọrụ si arụ ọrụ.
Enweghị ha, ị gaghị enwe ngwaọrụ ndị dị mkpa iji chọpụta ụzọ ahịa ndị ahụ ga-aga. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị iji onye na-ere ahịa Forex na-enye ọtụtụ akara ngosi ama ama. Nke a kwesịrị ịgụnye mmasị nke Averages Moving Averages, Bollinger Bands, Relative Strength Index, na Fibonacci Retracement Levels.
Ikwesiri inyocha usoro iwu nke onye ahia ahia gi. Na opekata mpe, onye na-ere ahịa ga - ejide akwụkwọ ikike site na ngalaba na - ahụ maka ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na UK. ọ dị mkpa ka onye na-ere ahịa na-achịkwa ya ma na-achịkwa ya na Njikwa Ọrụ Ego (FCA).
On of the real license, ị kwesịrị ị na-eji oge ụfọdụ ịgagharị ore aha ya. Nwere ike ime nke a site na ị nyocha site na nyocha dị n'ịntanetị dị na ngalaba ọha.
Best Forex Broker maka Scalping 2021
Site na isoro ntuziaka ndị a dị n'elu otu esi ahọta onye na-ere ahịa azụmaahịa maka ịkpụchasị, ị ga-enwe ngwaọrụ achọrọ iji chọta ikpo okwu nke kachasị egbo mkpa gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị oge iji rụọ ọrụ nke gị, anyị edepụtarala onye na-ere ahịa kacha elu anyị.
eToro na-eme ka ọnụọgụ anyị bụrụ otu ebe n'ihi na a na-ahazi ikpo okwu maka ndị nwere obere ahụmịhe na oghere azụmaahịa. Nke mbu, usoro ndebanye aha na-ewe ihe na-erughị nkeji 5, ma inwere ike itinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ nnabata ụlọ akụ. Ọzọ, onye na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla, yabụ naanị ị ga-echegbu onwe gị gbasara mgbasa.
N'ụzọ dị oke mkpa, ikpo okwu azụmaahịa dị mfe iji, ma ị nwere ike itinye aka na 'Detuo ahia'. Nke a bụ ebe ị idetuo ịzụta na ire iwu nke ndị ahịa azụmaahịa nwere akara na-edebanye aha na eToro. Get ga-ahọrọ ego ole ịchọrọ ịda mgbe ị na-edegharị ndị ahịa, yabụ na ị nwere ohere ị ga-enweta uru na-enweghị mkpa ibuli mkpịsị aka gị.
Ọ bụrụ n’ị gụọ ntuziaka anyị site na mbido ruo n’ọgwụgwụ, ị kwesịrị ị matala ugbu a ihe ahịa azụmaahịa bụ yana otu esi arụ ọrụ. Anyị emebiwo ihe ndị bụ isi nke ihe ị ga - eme iji mee ka ọrụ ịzụ ahịa gị na ụkwụ aka nri. Nke a gụnyere ikike ịgụ eserese 1 nkeji, yana mkpa ịtọ ngwụcha nkwụsị na ezi uche na nkwụnye ego. N'ime nke a, ị ga - enwe ohere kachasị mma iji belata nsogbu gị.
Agbanyeghị, ọ dịkwa mkpa ka ị cheta na ị ga - enweta oke mmeri iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa. Nke a bụ n'ihi na uru gị ga - agbado na obere pasent ole na ole, yabụ ịkwesịrị ịme ọtụtụ n'ime ha ka ọ bụrụ na ị ga - aba uru. Anyị enyela gị ngọngọ zuru oke nke ihe ị ga-ele anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa azụmaahịa iji kwado ọrụ gị. N'elu mgbasa dị ala na ọrụ azụmahịa, ịkwesịrị ịhọrọ onye na-ere ahịa nke nwere ndekọ egwu dị oke mma na imezu iwu na microseconds.
Scalping bụ atụmatụ azụmaahịa na-ahụ ego 'obere ahịa' obere obere uru. Uru ndị a ga - abụ pips ole na ole n'otu ọnọdụ, agbanyeghị, ndị na - akpụ akpụ na - etinye ihe karịrị 100 trades kwa ụbọchị. Dị ka ndị dị otú a, a na-atụ anya na obere uru ndị a ga-abanye n'ọtụtụ ahịa bara uru ụbọchị niile.
Achọrọ m ịwụnye iwu nkwụsị-ọnwụ mgbe m na-ere ahịa?
Ojiji nke iwu nkwụsị bụ ihe kachasị mkpa achọrọ mgbe ị na-ere ahịa. Nke a bụ n'ihi na atụmatụ ahụ na-achọ ịzụ ahịa n'ụzọ dị oke egwu, yana enweghị mfu kacha nta. Nke a dị mkpa, dịka azụmaahịa azụmaahịa chọrọ oke mmeri mmeri karịa iji tụnyere azụmaahịa ịgbanye.
Kedu ihe dị iche n'etiti scalping na swing trading?
Zụ ahịa swing nwere ike ịhụ onye na-etinye ego na-emeghe oghere maka ọtụtụ ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa. N'aka nke ọzọ, ndị na-ere ahịa na-efegharị agaghị enwe ohere imeghe ihe karịrị nkeji ole na ole.
Ego ole ka m kwesịrị ịdabere na uru mgbe m na-ere ahịa?
Onweghi otu azịza kwesiri ịza ajụjụ ya, ebe ọ bụ na ndị ahịa abụọ abụghị otu. Ihe kachasị mkpa ị ga-ele anya bụ nha nke iwu iji nweta uru iji nweta iwu nkwụsị gị. Ikwesiri inweta nguzozi nke oma iji hu na i chebe ego gi.
Kedu klas kachasị mma maka azụmaahịa ahịa?
Forex na-enyekarị aka maka ịzụ ahịa ahịa - karịsịa ndị isi. Nke a bụ n'ihi na isi ụzọ ego na-erite uru site na nnukwu mmiri, obere volatility, na ahịa na-arụ ọrụ 24/7.
Achọrọ m itinye mpempe akwụkwọ mgbe m na-ere ahịa?
Achọghị ka itinye ihe eji eme ka scalping baa uru. Agbanyeghị na ị ga - eche naanị uru dị ala, enwere olile anya na ị nwere ike itinye ọtụtụ azụmaahịa ọganiihu kwa ụbọchị.
Ego ole ka m kwesịrị ịmalite mgbe m na-ere ahịa?
Ọ bụrụ n'inweghi obere ahụmịhe nke ịzụ ahịa azụmaahịa, anyị ga-atụ aro idobe osisi gị na obere obere. O yikarịrị ka ị ga-emehie ihe mgbe mbụ ị malitere, ya mere, ọ kachasị mma izere itinye onwe gị n'ihe ize ndụ ruo mgbe ị ga-enwe ike iru ala.
Emelitere ikpeazụ: January 22nd, 2021